Umbiko wezokuvakasha UKRAINE - Izwe elikhulu eMpumalanga Yurophu phakathi koLwandle Olumnyama namasonto amaningi egolide obu-Orthodox - iSven Luca World
Umbiko wezokuvakasha UKRAINE - Izwe elikhulu eMpumalanga Yurophu phakathi koLwandle Olumnyama namasonto amaningi egolide obu-Orthodox
Visa nezidingo entry Ukraine:
Imininingwane evela eHhovisi Langaphandle ohambweni lwakho oluya e-Ukraine:
I-Ukraine izwe laseMpumalanga Yurophu elinabantu abangaba yizigidi ezingama-43. Ngemuva kweRussia, inendawo yesibili ngobukhulu ezweni lonke eYurophu. I-Ukraine inqamula iRussia empumalanga esenyakatho nasempumalanga, iBelarus enyakatho, iPoland, iSlovakia neHungary entshonalanga, iRomania neMoldova ngaseningizimu-ntshonalanga, neBlack Sea noLwandle lwase-Azov ngaseningizimu.
NgoDisemba 1991, i-Ukraine yathola ukuzimela kombuso ngemuva kokuhlakazwa kweSoviet Union. Iningi labantu likhuluma isi-Ukraine nesiRussia. Inani lamaRussia elisendaweni kazwelonke yase-Ukraine licishe libe yi-18%. Imali yezwe esemthethweni ibizwa nge-hryvnia, lapho i-1 euro icishe ibe yi-31 UAH.
Njengoba ingu-57% wendawo yayo kazwelonke, i-Ukraine inesilinganiso esiphakeme kakhulu somhlaba olimekayo osezingeni eliphezulu emhlabeni, okwenza kube ngumkhiqizi wezinhlamvu wesikhombisa ngobukhulu emhlabeni.
Amadolobha amakhulu kuleli ahlanganisa iKiev, iKharkiv, i-Odessa, iDnipropetrovsk, iDonetsk, iZaporozhye neLviv.
Inhlokodolobha yase-Ukraine yiKiev, esemfuleni iDnieper, onabahlali abacishe babe yizigidi ezintathu. I-Kiev yidolobha elikhulu kunawo wonke ezweni kanye nesikhungo sezomnotho nezokuvakasha. Idolobha elinokubonwa kwalo okuningi komlando liyisikhungo samasiko e-Ukraine, kanye neLviv ne-Odessa.
Ngenxa yamasonto alo amaningi nezindela, iKiev ibilokhu ibizwa ngokuthi "yiJerusalema laseMpumalanga" kusukela ngeNkathi Ephakathi.
Okuhehayo okuyinhloko eKiev kufaka phakathi iCave Monastery, iCathedral yaseSt. Sophia, iDormition Cathedral, iNational Historical Museum, iSikhumbuzo seVladimir the Saint, iSikhumbuzo seCossack Hetman, ukwakhiwa koMkhandlu Wedolobha laseKiev, iGreat I-capital boulevard, i-Andreassteig, i-Majdan - isikwele esikhulu sedolobha, itshe lesikhumbuzo lokuzimela lase-Ukraine, itshe lesikhumbuzo lobungane babantu, isithombe somama-izwe, iSt.Nikolai, isango legolide, isonto iSt Andreas kanye neSt. Isigodlo SikaMichael.
Idolobha lase-Odessa, elisoLwandle Olumnyama, idolobha eliyitheku elibaluleke kakhulu ezweni elinabantu abangaphezu kwesigidi. Uphawu lwe-Odessa yizinyathelo zePotemkin ezisuka edolobheni elidala ziya ethekwini. I-Panteleimon Monastery, i-Odessa Opera House neKinsky Palace ezinye zezinto eziheha izivakashi kuleli dolobha. I-Odessa ithandwa kakhulu ngabavakashi basolwandle, ikakhulukazi ehlobo, futhi iheha izinkulungwane zezivakashi.
Ukuvakasha kwami ​​kuphela e-Ukraine kuze kube manje bekuseLviv ngoJuni 2012, ngesikhathi se-European Football Championship. Ngichithe izinsuku ezimbili ezinhle kakhulu futhi ezingabizi kuleli dolobha elihle, ngobumnandi obuningi namasiko amaningi.
Idolobha elidala elingumlando laseLviv liyingxenye ye-UNESCO Heritage Heritage futhi libhekene nezakhiwo eziningi ezinhle. Izakhiwo ezisuka eRenaissance, Classicism, Baroque naseArt Nouveau eziseduze eziseduze zihlukile emhlabeni. Isikwele semakethe, iGalizische Platz, iSt.George's Cathedral, ihholo ledolobha, isakhiwo somnyango wesiteshi sesitimela esikhulu kanye namasonto amaningi namabhishobhi amakhulu aphakathi kwezindawo ezibaluleke kakhulu zabavakashi kuleli dolobha.
Esikhathini esizayo esiseduze ngizoya enhlokodolobha yaseKiev, ngoba ngisakhumbula lokhu njengeyona dolobha kuphela eYurophu.
ITravelogue TURKEY - Ukwehlukahluka kwaseMpumalanga namasiko kusabalale kumazwekazi amabili
Umbiko wezokuvakasha HUNGARY - Izwe elingenamkhawulo eYurophu Ephakathi phakathi kwePuszta, iDanube neLake Balaton
Umbiko wezokuvakasha iBELARUS - Izwe elikhulu kunazo zonke elizungezwe yiYurophu emngceleni osentshonalanga neRussia
Umbiko wokuhamba WALES - Ingxenye encane kunazo zonke zeGreat Britain
ITravelogue VATICAN CITY - Isikhungo seSonto lamaKhatholika nalapho uPapa ekhona ekhaya